अल्ट्रासोनिक्सको साथ द्रुत स्प्रउटिंग - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
स्प्राउट्स एक लोकप्रिय स्वास्थ्य खाना हो जुन भिटामिन, प्रोटीन, खनिज र एन्टिअक्सीडन्टहरूमा समृद्ध हुन्छ। अंकुरण प्रक्रिया श्रमशील र समय खपत गर्ने छ। बीजको अल्ट्रासोनिक सक्रियताले अंकुरण दर बढाउँछ, अंकुरण प्रक्रियालाई गति दिन्छ, पौष्टिक प्रोफाइल सुधार गर्दछ, र स्वस्थ बिरुवाको बृद्धि गर्दछ। अल्ट्रासोनिक स्टिपिing र बीजको प्राइमिing भनेको तपाईको अंकुर क्षमता बढाउनको लागि उत्तम टेक्निक हो।
टुसाउने बिउ, अन्न र गेडागुडी
अंकुरहरू अल्फल्फा, क्लोभर, सूर्यमुखी, ब्रोकोली, सरसों, मूली, लसुन, डिल, कद्दू, बदाम, अनाज (उदाहरणका लागि गहुँको बेर, क्विनोआ, जौ, राई, बकउराट, ज्वार, बाजरा), फलफूलका अंकुरित बिउहरू हुन्। , मटर, छोला, मसूर) साथै विभिन्न बीन्स, जस्तै मुंग, किडनी, पिन्टो, नौसेना, र सोया। स्प्राउट्स फाइटोन्यूट्रिएन्टहरू जस्तै प्रोटीन, भिटामिन, खनिज र एन्टिआक्सीडन्टमा धनी हुन्छ र क्यालोरी, फ्याट र सोडियमको कम हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई व्यापक रूपमा लिइन्छ “स्वास्थ्य खाना” र "सुपरफूड"। दैनिक पोषण योजनामा स्प्राउट्स सहित, शरीरलाई फाइबर, भिटामिन, खनिज, र अन्य स्वास्थ्य-बढावा गर्ने फाइटोन्यूट्रिएन्ट्सको पोषण गर्न मद्दत गर्दछ।
स्प्राउट्स र माइक्रोग्रेन्समा पोषक तत्वहरूको जैवउपलब्धता: अनाज र फलफूलहरूमा विभिन्न एन्टी-पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्, जसले पाचनलाई अवरोध पुर्‍याउँछ र सूक्ष्म पोषक तत्व र खनिजहरूको जैविक उपलब्धतालाई रोक्दछ। उदाहरणका लागि, ट्रिप्सिन इनहिबिटरहरू र फाइटेट्स, जुन अन्नहरू र फलफूलहरूमा हुन्छन्, क्रमशः प्रोटीन डाइजेबिलिटी र खनिज अपटेक कम गर्दछ। ट्रिप्सिन अवरोधकर्ताहरूले पाचन एन्जाइम ट्राइपसिनको गतिविधिमा बाधा पुर्‍याउँछन्, जसले गर्दा परिणामस्वरूप इन्जेस्टेड प्रोटीनहरू शरीरको अयोग्य र पाचन हुन सक्दैन।
तसर्थ, अंकुरण र अंकुर यी एन्टी-पोषक तत्वहरूलाई निष्क्रिय गर्नका लागि लागू गरिन्छ। टुसाउने क्रममा, पोषक तत्व र फाइटोकेमिकलको उत्पादनको लागि मार्गहरू सुरु हुन्छन् र एन्जाइमहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यस अर्थबाट, अंकुरित बीउ र फलफूलहरूले जैविक पहुँचयोग्य पोषक तत्वहरूको विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान गर्दछ।
अंकुरण र अंकुरण प्रक्रियाको अवधिमा, अन्तर्जात एन्जाइमहरू जस्तै α y अमाइलेज, पुलुलानासेज, फाइटाज, र अन्य ग्लुकोसिडेसस बीजमा सक्रिय हुन्छन्। यी एन्जाइमहरूले एन्टि-पौष्टिक तत्वहरूलाई गिराउँछन् र जटिल मक्रोन्यूट्रिन्ट्सलाई सरल र अधिक पचाउन सक्ने फार्महरूमा भत्काउँछन्।
स्प्राउट्स स्वास्थ्य प्रवर्धन पोषकहरू जस्तै प्रोटीन, क्लोरोफिल, भिटामिन, खनिज, एंजाइम, एमिनो एसिड र फाइटो-रसायनहरूले भरिएका छन्। उदाहरण को लागी, ब्रोकली स्प्राउट्स सल्फरोफेन मा धेरै धनी हुन परिचित छ। परिपक्व ब्रोकोली फ्लोरेटहरूको तुलनामा, अंकुरित ब्रोकोली बीउमा times० गुणा बढी सल्फरोफेन हुन्छ।
स्प्राउट्सको खेती परिश्रमशील र समय खपत गर्ने छ। अंकुरण प्रक्रियाको क्रममा, माइक्रोबियल संक्रमण र बिघटन रोक्न स्वच्छता र सेनेटरी अवस्था महत्त्वपूर्ण छ। अल्ट्रासोनिक सहायताले भिजाउने, अंकुरण र अंकुरले पोषणयुक्त धनी, जोसिलो अंकुरित बिरुवा र बिरुवाको खेती र बृद्धि गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक्सको साथ स्प्राउट्स र माइक्रोग्रेन्सको उन्नत खेती
अल्ट्रासोनिक स्टिपिing, अंकुरण र अंकुरले तपाईंको स्पउउट र माइक्रो-सागको खेती प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदछ। Sprouting एक मेहनती र समय खपत प्रक्रिया हो, जो मोल्ड र ब्याक्टेरिया द्वारा बिग्रन को खतरा छ। बीजले पानीमा (भिजाउने र भिज्ने अवस्थामा) र अत्यधिक चिसो वातावरणमा (अंकुरणको बखत) समय खर्च गर्ने हुँदा सूक्ष्म जीवाणु संक्रमण र बिग्रने जोखिम धेरै हुन्छ। जब बिग्रेको स्प्राउट्स र माइक्रो-सागपात खपत गरिन्छ, त्यसले गम्भीर खाद्य विषाक्तताको कारण दिन्छ। अल्ट्रासोनिक स्टिपिing र अंकुरणले भिजाउने र टुसाउने अवधिलाई कम गर्दछ। जब बीउ पलाउँछ र छिटो बढ्छ, उच्च चिसो वातावरणमा उपस्थितिको समय कम हुन्छ। त्यस माध्यमबाट, माइक्रोबियल विकास र बिग्रेको लागि समय कम गरिएको छ। अल्ट्रासोनिक अंकुरणले तपाईंको अंकुरण प्रक्रियालाई अझ सक्षम बनाउँदछ, यसले दूषित हुने जोखिमलाई पनि कम गर्दछ।
यसबाहेक, विभिन्न अनुसन्धान अध्ययनहरूले देखाए कि अल्ट्रासोनिक भिजेको र अंकुरित स्प्राउट्स एक उच्च पोषण प्रोफाइल जस्तै उत्कृष्ट प्रोटीन, भिटामिन र फाइटोन्यूट्रिएन्ट सामग्री द्वारा उत्कृष्ट पारिन्छ जब पारम्परिक अंकुरित बीजको तुलनामा। अल्ट्रासोनिक रूपमा उगिएको स्प्राउट्सले पनि उच्च अंकित जोसको प्रदर्शन गर्दछ।
अल्ट्रासोनिकरेटर UP400St बीज प्राइमि .को लागि। अल्ट्रासोनिक उपचार परिणाम छिटो अंकुरण, उच्च पोषक प्रोफाइल र सुधारिएको बिउ जोसिलो मा हुन्छ।
अल्ट्रासोनिक हाइड्रो-प्राइमिले पानी र पोषक तत्वहरूको सेवनलाई सुधार गर्दछ। सोनिकेटेड दाल (W० डब्लू / जी) बनाम गैर-सनाइकेटेड दालको तुलनाले सोनिकेशनले पानीको मात्रामा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक बीज सक्रियता
अल्ट्रासोनिक रूपमा गहन अंकुरण अल्ट्रासोनिक / ध्वनिक गुहिकाको मेकानिकल प्रभावको कारणले हुन्छ। अल्ट्रासोनिक काभेटेशनको प्रभावले बीजको खोललाई असर पार्दछ: यसले बीज कोटलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छ र यसैले बीजको सतहको ठूलो पोर्सोसिटी सिर्जना गर्दछ। यसको शाब्दिक अर्थ यो छ कि बीज कोटिंगको अल्ट्रासोनिक बिखण्डनले शेल पर्फरेट गर्दछ। यसबाहेक, Sonication प्वाल आकार ठूलो गर्दछ कि बीज कोर र वृद्धि मध्यम बीच एक उच्च सामूहिक हस्तान्तरण हुन्छ। तीव्र द्रव्यमान स्थानान्तरणले बीज र पानी र पौष्टिक तत्त्वहरूको साथ प्रदान गर्दछ। बढेको पोर्रोसिटी र पारगम्यताका कारण, बीउले पानी र पौष्टिक द्रुत लिन सक्दछ। सुक्खा बीज र अन्नमा राम्रो हाइड्रेसन र बढ्दो पानी प्रतिधारण क्षमताले स्प्राउट्सको तीव्र विकास गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक बीज उपचार अवधि केहि मिनेट लाग्छ। विशिष्ट Sonication अवधि बीउ कोट को कठोरता मा निर्भर गर्दछ र सबै भन्दा बीउ प्रजातिहरु को लागी to देखि6मिनेट को लागी सावधान हुन सक्छ। अल्ट्रासोनिक उपचारलाई विशिष्ट बीज / अन्न प्रकारमा अनुकूलन गर्न, अल्ट्रासोनिकेटरको आयाम एक महत्त्वपूर्ण कारक हो जसले अल्ट्रासोनिक भिजाउने र बीजको प्राइमिingको प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। बीज कवच कडा र मोटो, उच्च आयाम आवश्यक छ। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्ससँग अल्ट्रासोनिक सहायताले भिजाउने / भिज्ने, प्रिमि and र बीजको अंकुरणको गहन ज्ञान छ। हामी तपाइँलाई तपाइँको अंकुर प्रजातिहरू र अंकुरण क्षमताहरूको लागि सबै भन्दा उपयुक्त र प्रभावी अल्ट्रासोनिक उपकरण प्रस्ताव गर्नेछौं।
लामो sonication परिणाम क्यालेन्टा हाइब्रिड को बेहतर अंकुरण मा। (शिन एट अल 2011)
अल्ट्रासोनिक अंकुरित स्प्राउट्सको उच्च पोषण मूल्य
अल्ट्रासोनिक सहायताले अंकुरणले केवल अंकुरण गति र ऐलिटेसन दर बढाउँदैन, तर यसले स्प्राउट्सको पोषण गुणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। धेरै अध्ययनहरूले अल्ट्रासोनिकेसनद्वारा फाइटोन्यूट्रिएन्टहरूको बृद्धि जैव संश्लेषण देखायो। यांग एट अल। (२०१ 2015) सोनाबीटेड सोयाबीन स्प्राउट्समा बढाइएको isoflavonoid सामग्री मापन गरियो। गैर-सोनिकेटेड नमूनाहरूसँग तुलना गर्दा क्रमशः of .1 .१3 र .9 .9..9१% ले आईसोफ्लाभोनोइड्स डाइडजेन र जेनिस्टीनको मात्रा बढाइयो। अल्ट्रासोनिक रूपमा प्राइम सोया सिमीले एलिभेटेड गामा-एमिनोब्यूट्रिक एसिड (GABA) 43 43..4% ले देखायो। अर्को अध्ययनमा, यू एट अल। (२०१ 2016) ले अल्ट्रासोनिकली उपचार गरिएको रोमाइन लेटसको साथ सुधार गरिएको एन्टिआक्सीडन्ट क्षमता अवलोकन गर्‍यो।
एम्पोफो (२०२०) ले उनको थेसिसमा देखाए कि be 60 मिनेटको लागि W 360० डब्ल्यू मा साझा सिमीको Sonication अंकुरण को 96 h घण्टा मा तनाव मार्कर को एक उल्लेखनीय बृद्धि संचय पैदा भयो। बीउ बढेको समयमा तनावले डिफेन्स फेनिलप्रोपानोइड ट्रिगर गर्ने एंजाइमहरू, फिनोलिक यौगिकहरू र एन्टिऑक्सिडन्ट क्षमताको उन्नत गतिविधिहरू निम्त्याउँछ गैर-सोनिकेटेड नियन्त्रण नमूनाको तुलनामा। अल्ट्रासोनिकेसन नियन्त्रण को तुलनामा, 60 h द्वारा टुसाउने समय घटायो। अल्ट्रासोनिक रूपमा उपचार गरिएको बीजले अंकुरणको २ h घण्टामा रेडिकलहरू देखा प showed्यो जुन बढेको अंकुरणको समयमा महत्त्वपूर्ण रेडिकल विस्तारको साथ देखा पर्‍यो, जबकि तुलनामा नियन्त्रण नमूनाहरूले अंकुरणको h to घण्टासम्म रेडिकल उद्भव ढिलाइ गरे। पौष्टिक मूल्यको सम्बन्धमा, सोनेटिटेड बीन स्प्राउट्सले -..6 गुना उच्च कुल फ्ल्याभोनोइड सामग्री देखायो र ११.77 गुणा उच्च कुल एन्थोसाय्यानिन सामग्री देखायो जब गैर सोनिकेटेड नमूनाहरूको तुलनामा।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ प्रोब अल्ट्रासोनिकेटरहरू ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य हुन्छन्। प्रशारण मापदण्डहरू जस्तै एम्पलिट्यूड र तापमान नियन्त्रणका साथसाथै यूनिफार्म र सबै बीजहरूको अल्ट्रासोनिक काभेटेशन जोनमा एक्सपोजर पनि बीज र स्प्राउट्समा नियमन गरिएको बायोसिन्थेसिसलाई उत्तेजित गर्न आवश्यक कारकहरू हुन्।
अल्ट्रासोनिक-प्रोमोटेड स्प्राउटिंगको फाइदाहरू
पूर्व-भिगोने कम गरियो
अधिक समान वृद्धि
परिष्कृत पोषक तत्व
बढेको बिउ जोसियो
स्प्राउट्सको उच्च पोषण मूल्य
मिरोबियल खराब हुने जोखिम कम भयो
सरल र अपरेट गर्न सुरक्षित
SonoStation – अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरूको लागि एक सरल टर्नकी समाधान
अल्ट्रासोनिक Sprouting को केस स्टडीज
हसन एट अल। (२०२०) प्रदर्शन गर्नुहोस् कि अल्ट्रासोनिकली अंकुरित ज्वारको दानाले उल्लेखनीय सुधारिएको पौष्टिक प्रोफाइल देखाउँदछ। ज्वारको बीजमा प्रोफाइल र फाइटोन्यूट्रिएन्टहरूको मात्रा अल्ट्रासोनिकेसन द्वारा बढाइएको थियो। विभिन्न फाइटोकेमिकल घटक (एल्कालोइड्स, फाइटेट्स, सेपोनिन्स, र स्टेरोलहरू), कट्टरपन्थी स्केभिंग गतिविधि (२,२-डिफेनेल-१-पिक्रिलहाइड्राजाइल परख, फेरिक कम गर्ने एन्टिऑक्सिडन्ट शक्ति परख, र अक्सिजन कट्टरपन्थी शोषण क्षमता परख), फिनोलिक प्रोफाइल (कुल फिनोलिक्स सामग्री ज्वार स्प्राउट्सको अल्ट्रासोनिक अंकुरणको प्रभावको लागि कुल फ्लाभोनोइड सामग्री, फ्युलिक एसिड, गेलिक एसिड, क्याटेचिन, क्वेरसेटिन, र टेनिन) मा भिट्रो प्रोटीन पाचन क्षमता (IVPD%) जाँच गरियो। सबै परीक्षण गरिएका कारकहरू अल्ट्रासोनिक उपचारद्वारा सुधार गरियो। उपचार गरिएको स्प्राउट्सले विशेष रूपमा उच्च कट्टरपन्थी स्केभng्गिंग गतिविधि र IVPD को उच्च प्रतिशतको साथ एक धनी फिनोलिक प्रोफाइल प्रदर्शन गर्‍यो।
Son मिनेट को लागी %०% आयाम मा हल्का Sonication उपचार महत्वपूर्ण सुधारहरु देखायो। अंकुरण पछि, अल्ट्रासाउन्ड-उपचार गरिएको ज्वार स्प्राउट्सले फाइटोकेमिकल्सको उच्च प्रोफाइल देखायो जुन कम लागतमा उच्च-प्रोटिन फूडल पदार्थहरू उत्पादन गर्न मूल्यवान कच्चा मालको रूपमा काम गर्न सक्दछ।
पेट्रु एट अल। (२०१)) cavation बुलबुले को पतनको समयमा अल्ट्रासोनिक cavitation को कार्य अनुसन्धान। तिनीहरूले पत्ता लगाए कि अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले बीज कोटहरूमा माइक्रो-इरोक्सन उत्पन्न गर्दछ, जसले बीजको खोलको पारगम्यता बढाउँछ र सामूहिक ट्रान्सफरलाई बढावा दिन्छ। तिनीहरूले बीज अंकुरण, उदय र ट्रिटिकल (राई र गहुँ संकर) बिरुवाको बृद्धिको शुरुवात चरणको अल्ट्रासोनिक उपचारको प्रभाव अध्ययन गरे। Regime० बीजको नमूनाहरू निम्न शासनमा पानीमा अल्ट्रासाउन्डद्वारा उपचार गरिएको थियो: २ treatment डिग्री डिग्री तापमानमा आयाम १ 15 µm विभिन्न उपचार अवधि ०, २,,,,, min मिनेटको लागि। त्यसपछि बीउ अंकुरणको लागि राखिएको थियो र कोठाको तापमानमा एउटा भिजेको फिल्टर कागजमा टुसाइयो। अमेरिकी उपचारको सबैभन्दा स्पष्ट प्रभाव4मिनेटको अवधिमा देखियो। अल्ट्रासोनिक रूपमा ale मिनेट ट्रिटिकल बीजमा उपचार गरिन्छ र उपचार नगरेका बीज (नियन्त्रण) संग तुलनामा बिरुवाको उदयको बारेमा इष्टतम डेटा चित्र १ मा देखाइएको छ। अल्ट्रासोनिक उपचार गरिएको बीजको बिरुवाको औसत लम्बाई पत्ता लाग्यो। १ by द्वारा – २०% नियन्त्रण बीउहरूको लागि लम्बाई नाघ्छ। अल्ट्रासोनिक रूपमा उपचार गरिएको बीजले पहिले अंकुरण पाउँछ र अधिक अंकुरण जोम, बिरुवा र जराको उच्च लम्बाई प्रदर्शन गर्दछ।
इन्टर्सिफाइड अंकुरण र अंकुरितको लागि अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्सको उच्च प्रदर्शन प्रोसेसरहरू खाना र कृषिमा अंकुरण र अंकुर बढाउन, बीज-प्राइमिंग सहित ओस्मो-प्राइमि,, हाइड्रो-प्राइमि asका साथै किण्वन प्रक्रियाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। अत्याधुनिक प्रविधि, प्रयोगकर्ता-मैत्री, सेफ-टु-अपरेट र मजबूती सबै हाईल्सचर अल्ट्रासोनिक्स प्रोसेसरको प्रमुख सुविधाहरू हुन्।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ब्याच र अविरल प्रवाह-थ्रु प्रक्रियाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाइँको प्रक्रिया भोल्यूम र घण्टा प्रतिफल इनपुटमा निर्भर गर्दै, इनलाइन प्रसंस्करण सिफारिस हुन सक्छ। जबकि ठूलो भोल्यूमको ब्याचिing्ग बढी समय-र श्रम-सघन छ, एक निरन्तर इनलाइन Sonication प्रक्रिया अधिक कुशल, छिटो छ र महत्त्वपूर्ण कम श्रमको आवश्यकता छ।
प्रत्येक उत्पादन क्षमता को लागी अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उत्पाद दायराले प्रति घण्टा ट्रक भार प्रसंस्करण गर्ने क्षमतासहित बेन्च-टप र पायलट प्रणालीहरूमा कम्प्याट ल्याब अल्ट्रासोनिकेशर्सबाट कम्प्याक्ट ल्याब अल्ट्रासोनिकेशर्सको पूर्ण स्पेक्ट्रम कभर गर्दछ। पूर्ण उत्पाद दायराले हामीलाई तपाईंको प्रक्रिया क्षमता र लक्ष्यहरूको लागि तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर प्रस्ताव गर्न अनुमति दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक बेन्चटप प्रणाली सम्भाव्यता परीक्षण र प्रक्रिया अनुकूलनको लागि आदर्श हो। स्थापित प्रक्रिया प्यारामिटरहरूमा आधारित रैखिक स्केल-अपले प्रोसेसिंग क्षमताहरू साना लटबाट पूर्ण रूपमा व्यावसायिक उत्पादनमा बढाउन धेरै सजिलो बनाउँदछ। अप-स्केलिंग या त अधिक शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक मिक्सर एकाई स्थापना गरेर वा समानान्तरमा धेरै अल्ट्रासोनिकेटर क्लस्टर गरेर गर्न सकिन्छ। UIP16000 को साथ, Hielscher विश्वव्यापी सबैभन्दा शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर प्रदान गर्दछ।
सबै हिलस्चर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य छन् र त्यस्तै भरपर्दो कार्य उपकरणहरू। आयाम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर हो जसले अल्ट्रासोनिक अंकुरण र अंकुरणको प्रभावकारिता र प्रभावलाई प्रभाव पार्दछ। एक नरम कोटिंगको साथ बीउलाई हल्का Sonication उपचार र कम आयाम सेटिंग्सको आवश्यकता पर्छ, जबकि एक मजबूत र कडा खोलको साथ बीउहरू उच्च आयाममा सोनिकेटेड हुँदा राम्रो अंकुरण परिणामहरू देखाउँदछ। सबै हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स’ प्रोसेसरहरू आयाम को सटीक सेटिंग को लागी अनुमति दिन्छ। सोनोट्रोड्स र बूस्टर सी accessoriesहरू सामानहरू हुन् जसले विशाल परिमाणमा परिमाण परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। हिल्सचरको औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू धेरै उच्च आयामहरू वितरण गर्न र अनुप्रयोगहरूको माग गर्नको लागि आवश्यक अल्ट्रासोनिक गहनता प्रदान गर्न सक्छ। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै निरन्तर २ 24/7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ।
स्मार्ट एप्पलिट्यूड सेटिंग्स र स्मार्ट सफ्टवेयर मार्फत अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरूको स्थायी अनुगमनले तपाईंलाई बीउहरू सबै भन्दा प्रभावकारी अल्ट्रासोनिक सर्तहरूको उपचार गर्न दिन्छ। उत्तम अंकुरण परिणामहरूको लागि उपयुक्त सोनिकेशन!
हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतताले भारी शुल्क र मांग वातावरणमा २ 24/ duty अपरेशनको लागि अनुमति दिन्छ। यसले हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणलाई एक विश्वसनीय काम उपकरण बनाउँदछ जुन तपाइँको प्रशोधन आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा रैखिक मापन गर्न सकिन्छ। यसको मतलव तपाईले ल्याब वा बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरको प्रयोग गरेर प्राप्त गर्नुभएको प्रत्येक परिणामको रूपमा, उही समान प्रक्रिया प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर ठीक उही आउटपुटमा मापन गर्न सकिन्छ। यो जोखिम मुक्त सम्भाव्यता परीक्षण, प्रक्रिया अनुकूलन र वाणिज्यिक निर्माणमा पछिको कार्यान्वयनको लागि अल्ट्रासोनिकेसन आदर्श बनाउँदछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कसरी Sonication तपाईंको फुटबारी उपज र गुणवत्ता बढाउन सक्छ।
पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको र पारिवारिक रूपमा सञ्चालित व्यवसायको रूपमा, हिल्सचरले आफ्नो अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूको लागि उच्च गुणस्तरको प्राथमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ। सबै अल्ट्रासोनिकेटरहरू बर्लिन, जर्मनीको नजिक टेल्टोमा रहेको हाम्रो मुख्यालयमा डिजाइन, निर्माण र राम्ररी परीक्षण गरीएको छ। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको दृढता र विश्वसनीयताले यसलाई तपाईंको उत्पादनको काम घोडा बनाउँछ। २ load/7 अपरेशन पूर्ण लोड र माग वातावरणमा सञ्चालन हिल्सचरको उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिकेटरहरूको एक प्राकृतिक विशेषता हो।
तपाईं कुनै पनि फरक आकारमा हिल्सचर अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको प्रक्रियाको आवश्यकताहरूसँग ठीक कन्फिगर गर्नुहोस्। एक सानो प्रयोगशाला बीकरमा बीउहरूको उपचार गर्नेदेखि औद्योगिक स्तरमा बीज स्लरीहरूको लगातार प्रवाह-हुँदै मिक्स गर्ने सम्म, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले तपाईंको लागि एक उपयुक्त अल्ट्रासोनिकेटर प्रदान गर्दछ! कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् – हामी तपाईंलाई आदर्श अल्ट्रासोनिक सेटअप सिफारिस गर्न खुशी छौं।
किन स्प्राउट्समा बढी पोषक तत्व हुन्छ?
अंकुरण र अंकुरण बिरूवाको विकासको चरणहरू हुन्, जसमा विकासको थालनी गर्न र स्वस्थ, बाँच्न सकिने बिरूवाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न थुप्रै जैविक रसायनिक मार्गहरू सक्रिय हुन्छन्। यी जैव रासायनिक मार्गहरूले धेरै गुणा एन्जाइमहरूको सक्रियता समावेश गर्दछ। बायोसिन्थेसिस मार्फत, माध्यमिक मेटाबोलिट्स (उर्फ फाइटो-रसायन) इन्जाइमेटिक रूपान्तरणद्वारा गठन गरिन्छ। यी माध्यमिक मेटाबोलिटहरू स्वास्थ्य-प्रबर्धनको रूपमा चिनिन्छन्। प्रख्यात उदाहरणहरूमा पॉलीफेनोल, टर्पेनेस, सल्फुराफेन र अन्य थुप्रै समावेश छन्।
त्यस्ता बायोसिन्थेसिसको लागि उदाहरण एन्जाइम फेनिलालानिन अमोनिया-लाइज (PAL) हो। PAL एन्जाइमले बिभिन्न फाइटो-रसायनको बायोसिन्थेसिसको लागि मार्गहरू उत्प्रेरित गर्छ। जब यो एंजाइम निषेध गरिन्छ, यो फिनोलिक एसिड र फ्लाभोनोइड्सको बायोसिन्थेसिसको सीमित कारक हुन्छ। स्प्राउट्समा उच्च फाइटोकेमिकल सामग्रीको लागि सम्भावित विवरण ist कि PAL गतिविधि अंकुरणको अवधिमा अप-रेगुलेट गरिएको छ। वैकल्पिक स्पष्टीकरणहरूले सुझाव दिन्छ कि बाउन्ड फिनोलिक यौगिकहरू हाइड्रोलाइज्ड एन्ड / वा स्प्राउट्सको भ्रुण अक्षमा फिनोलहरूको डे नोभो बायोसिन्थेसिस हुन्छ। धेरै फाइटोकेमिकलहरू उनीहरूको एन्टी ऑक्सीडेटिव विशेषताहरूको लागि परिचित हुन्छन्, जसले अंकुरित अनाज र फलफूलहरूको बढेको एन्टीऑक्सीडन्ट गतिविधि वर्णन गर्दछ।
फाइटोन्यूट्रिएन्टमा उच्च, स्प्राउट्स खाना योजनामा उत्कृष्ट थप हो। फाइटोन्यूट्रियन्ट्सले मानव शरीरमा धेरै मार्गहरूमा योगदान गर्दछ र यसले रोगहरू रोक्न र / वा ameliorate गर्न सक्छ।
अनुसन्धानले अंकुरण र अंकुरित बिउ, अन्न र फलफूलका लागि विभिन्न पौष्टिक फाइदाहरू भेट्टाए:
अनाजको लागि, अंकुरणको h२ घण्टा पछि एक उल्लेखनीय वृद्धि भएको प्रोटीन सामग्री भेटियो। यसबाहेक, अंकुरण गरिएको बकवाइटमा कुल फिनोलिक्स, फ्लाभोनोइड, र कंडेन्डेड टेनिनको मात्रा बढेको थियो (झाhang एट अल।, २०१))।
अंकुरित औंला ज्वारमा, प्रोटीन पाचन क्षमता% 64% ले वृद्धि भयो। (Mbithi-Mwikya एट अल। 2000)
सेतो मकै कर्नेलको लागि, जब5दिनको लागि अंकुरित जैवउपलब्ध फेनोलिक यौगिकहरू% २% ले वृद्धि भयो।